Dhaqanka iyo Hiddaha, 01 April 2014
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #205
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay dhaqanka Somalida iyo ku digashada
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #204
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay khaladka hirgalay ee oraahyada Afka Soomaaliga.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #203
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha ee toddobaadkani waxa uu ku saabsan yahay waano ku socota xaas cusub oo uu guursaday mid ka mid ah Suugaanyahanadii hore.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #202
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonaa kaalintii ay culumaddii Soomaaliyeed ee hore ka qaateen isku xirka diinta Islamka iyo Soomaalida, iyagoo adeegsanaya Afka Carabiga oo ay u turjumayeen Afka Soomaaliga.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #201
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonaa habkii Somalidii hore ay u sameynayeen eray bixinta iyo tarjamaadda erayada afafka shisheeye.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #200
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonaa kaalintii ay saxafiyiintii rug cadaaga ahaa ka qaateen horumarinta saxaafadda Afka Soomaaliga.
Banraamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #199
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonaa qaabka adeegsiga laaxinka ah ee warbaahintu u adeegsato kalmado ka mid ah Afka Soomaaliga.
Banraamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #198
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonno qeybtii ugu dambeysay ee taxanihii ku saabsanaa dhaqanka Soomaalida iyo xididka.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #197
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #196
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxaan idinkuugu heynaa qeyb kale oo ka mid ah taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu ay dhex-marto.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #195
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha iyo qeyb kale oo ka mid ah taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu ay dhex-marto.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha #194
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha todobaadkan waxaanu idiinku soo gudbin doonno qeyb kale oo ka mid ah taxane ku saabsan dhaqankii ay Soomaalidii hore ka sameysatey habka mudan in ay u wada dhaqmaan dadka xididnimadu ay dhex-marto, waana qeybtii 10aad ee taxanahaasi.